Qaab-dhismeedka Istaraatiijiyada ee McKnight
Hay'adda McKnight Foundation Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah wuxuu ogeysiinayaa shaqada dhammaan barnaamijyadeena, oo uu ku jiro Barnaamijka Caalamiga ah. Waxay hagtaa sida aan u sameyno deeqdeena, aragtideena iyo doorkeenna, iyo xiriirkeenna. Qaab dhismeedka Istaraatiijiyadeed, oo si joogto ah loo waafajiyo, wuxuu sharxayaa himilada aasaasiga, qiyamka, ballanqaadyada, iyo qaababka ay u shaqeyso.
Shuruudaha Xulashada: Su'aalaha Waxaan Weydiino
CCRP, deeqaha waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo shuruudaha lagu darayo barnaamijka iyo mudnaanta gobolka iyo istaraatiijiyadaha, tayada, hal-abuurka, iyo wacyigelinta jawiga degaanka. Dib u eegista soo jeedinta, waxaanu tixgelinaynaa kuwan soo socda:
Miyay habka mashruuca iyo diiradda la socotaa Aragtida CCRP ee isbedelka?
Mashruucu miyuu wax ku biiriyaa? Horumarinta xooga dhaqatada ama AEI?
Miyuu diiradda saarayaa? wanaajinta dhinacyada muhiimka ah ee beeraha yaryar gudaha nidaamyada cuntada ee gobolka iyo siyaabaha lagu wanaajinayo sugnaanta cuntada, dakhliga, nafaqada, iyo sinnaanta natiijooyinka qoyaanka beeralayda yar yar?
Miyuu mashruucu muujinayaa a aragtida nidaamka, oo ay ka mid tahay tixgelinta arrimaha sida horumarinta miraha iyo helitaanka abuurka; cayayaanka / maareynta cudurka; ciidda iyo maamulka biyaha; xoojinta ururada beeraleyda; kor u qaadista suuqyada; Isbeddelka isbedbedelka nidaamyada waxaa ka mid noqon kara waxsoosaarka joogtada ah, isticmaalka iyo / ama kaabayaasha bulshada iyo suuqyada Dhibcaha soo galaya waxaa ka mid ah horumarinta miraha iyo helitaanka abuurka; cayayaanka / maareynta cudurka; caafimaadka carrada; xoojinta ururada beeraleyda; kor u qaadista suuqyada; iyo / ama baaritaanka nafaqada iyo waxbarashada?
Miyuu yahay mashruuc lagu habeeyey si loo xalliyo dhibaatooyinka lagu tilmaamay nidaamyada cuntada iyo beeraha?
Qorshaha mashruuca miyuu muujinayaa a suurtogalnimada saameyn wanaagsan ee qoysaska beeraha yaryar?
Ma jiro iskaashiga dhabta ah iyo iskaashiga kuwaas oo ku lug leh cilmi-baaris, horumarin, ururrada beesha, beeralayda, iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay sida haboon iyo loona baahan yahay, iyo sidoo kale habab cusub oo wax ku ool ah?
Mashruucu miyuu muujinayaa? dhaqanka iyo dareenka lamaanaha?
Waa maxay kartida mashruuca ee wax ku biirinta aqoon korodhsiga aqoonta iyo farsamooyinka "alaabta dadweynaha" ka baxsan boggeeda gaarka ah, xaaladaha, iyo ujeedooyinka?
Nidaamka Gudbinta Codsiyada Codsadaha
Haddii lagugu martiqaado inaad codsato, waxaa lagala xiriiri doonaa shaqaalaha McKnight iyo la taliyeyaasha goboleed si ay ugala hadlaan fikradahaaga oo ay kugu hagaan habka codsiga soo socda, kaas oo qaadata qiyaastii 7-9 bilood oo ah qoraalka qoraalka ah ee go'aanka maalgelinta ugu dambeysa:
Gudbi qoraalka codsiga qoraalka ah u soo dir codsiga CCRP. Tilmaamaha, waqtiyada kama dambaysta ah, iyo bogga internetka ee McKnight ee xariirka internetka ayaa laguugu soo diri doonaa.
Haddii lagu martiqaado, soo-jeedin buuxda oo internetka ah. Shaqada la soo jeediyey waxay ku jiri doontaa marxalad ama qorsheyn labadaba ah oo caadiyan soconaya lix bilood illaa sanad kadibna waxaa ku xiga marxaladda hirgelinta oo caadi ahaan socota laba ilaa saddex sano.
Inta lagu jiro marxaladda aasaasiga ah, mashruuca wuxuu xoojin doonaa lana hawl gali doonaa dhammaan wada-hawlgalayaasha la soo jeediyey; samaynta qorshe shaqo oo dhamaystiran, aragtida mashruuca isbeddelka, su'aalaha kormeerka iyo qiimeynta, iyo su'aalaha cilmi baarista iyo nidaamyada, marka lagu daro samaynta cilmi-baaris hore ama xog ururinta.
Maalgelinta marxaladda hirgalinta waxay ku xirnaan doontaa marxaladda ku-meel-gaar ah.
Muhiim: Haddii soo jeedinta la ansixiyo maalgelinta, mashruucani wuxuu kaloo noqonayaa xubin ka mid ah Community of Practice (CoP) sida lagu qeexay Ka Fikirka CCRP ee kaqeybgalka Wadashaqaynta.
Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada ee Wadajirka ah wuxuu leeyahay nidaam codsi oo xiran oo leh wicitaano marmar ah oo la beegsanayo qoraallada fikradaha. Codsiyada maalgelinta waxaa laga aqbalaa oo kaliya ururada lagu martiqaaday inay codsadaan ama ka jawaabaan wicitaan la beegsaday.